Semalt - Zvaungaita Kuti Usabvisa Zvaunoshanya kubva kuGoogle Analytics
Waiziva here kuti zvirongwa zvakadai seGoogle Analytics dzinoona mabasa ako pane webhusaiti yako iyo inokanganisa nhamba dzako?
Igor Gamanenko, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji ( Semalt , anopa pano mamwe mazano anobatsira panyaya iyi.
Kuzvidzivirira izvi, unogona kushandisa zvinyorwa kuti uchengetedze mafambiro asina kukodzera uye asingakoshi kubva pakuratidza panzvimbo ino. Paunoshandisa ma filters anodikanwa, mazita ako haazoratidzi dhewed data sezvo mabasa auchaona pane yako nzvimbo ichava magwagwa chaiwo kubva kune vaeni vakakodzera. Izvi zvinoshandiswa kwete kungobatsira kufuta kushanya kwako panzvimbo yepaiti, asi vanobatsirawo pakutsvaga spam kusanganisira mweya kutumira spam uye kutumirwa kwebho spam panzvimbo.
Paunenge uchishandisa Google Analytics, unoda kuziva maIndaneti yezvigadziri zvaunoshandisa. Cherechedza kuti unofanirwa kuona dzose maIndaneti dzemashandisi ose aunoshandisa kuti uwane site - slotter casino. Mukuwedzera, cherechedza mupfungwa kuti IP kero inoshandura nenguva, saka unoda kuongorora maIndaneti nguva nenguva uye kuvandudza mafiritsi kana zvichidiwa.
Saka, ungaita sei kuziva IP address kuti usabvisa kushanya kwako? Kunyange zvazvo pane nzvimbo dzakadai sekunyora pikiti yako yep IP mu browser yako, uye kero inowanikwa mumigumisiro yekutsvaga.
Kazhinji, iyo IP yakaratidzwa mumigumisiro ichaita seyiyi: 60.40.210.157. Kero yakaratidzwa muurongwa hwepamusoro inozivikanwa se IPv4 address. Mune zvimwe zviitiko, kutsvakurudza kunogona kutora tsananguro yakasiyana yenhamba inoratidzwa mumutauro unotevera: 2002: 0db6: 75a5: 0000: 0000: 8a4e: 0180: 4339. Mazita anowanikwa mumutauro wepamusoro anozivikanwa se IPv6. Aya ndiwo marudzi matsva eateri ayo vanhu vari kufamba nayo. Zvisinei, zvose IPv4 uye IPv6 zvinogona kushandiswa kufuta kunze kwekushandisa ma "IP adresses" muGoogle Analytics..Kana uchinge uine IP kero, kopi uye uiise mumunyori wemagwaro akaita se TextEdit kana Notepad.
Zvino sezvo iwe une kero mumutauro wechirongwa chegwaro muakaunti yako yeGoogle Analytics uye sarudza nzvimbo yauri kusika iyo firiji. Kana iwe ukanyora pa Admin Admin mukati memusoro, sarudzo ye 3 columns ichazaruka. Muchikamu chekurudyi, iwe uchaona hutano hwakanyorwa ma Filters. Kira pairi. Kunze kwekuti iwe wakasika zvidzoro kare, urongwa hwezvinyorwa zvisina kuvhara huchazaruka. Dzvanya paIndaneti Yokuwedzera.
Zvinokurudzirwa kuti utumidze firiji yako sezvo iwe unogona kuva nemafuta anoverengeka kupfuura nguva. Semuenzaniso, kana ukashanda paIndaneti inofambisa, unogona kuitumidza Home IP Address. Pasi Paya Firimu, iise pa Predefined Type. Nokusarudza Firiji yeka pasi menyu, sarudza Itai Yega.
Zvadaro, ramba uchienda pane Sarudza Destination kana Chitubu. Ichi ndicho chikonzero chemotokari yako. Nokuda kwemigumisiro yakanakisisa, sarudza Chitima kubva Kubhuku reIndaneti. Iye zvino, pfuurira kune yekupedzisira pasi pasi bhokisi uye sarudza Izvo Zvakakosha Kusarudza. Paunenge wapedza nebasa rose, chengetedza Bhokisi re Save. Iye zvino, iwe uchaona iyo firiji itsva pane urongwa.
Kuti uone kana wakabvisa kushanyira kwako kubva kuGoogle Analytics, enda kuHat Time Time uone uye ona kana kushanyira kwako kunoratidzika mumatsara. Ramba uchifunga kuti kuchinja kwawakaita kungatora maminetsi mashomanana kuti aite.
Kana ukacherechedza IP yako yekero ichiri kutarisa, chengeta yako filtration settings zvakare. Kunyanya cheki chekuita kuti ave nechokwadi chokuti kero yeP IP ine nhamba dzaro dzose sezvo vanhu vanowanzoshaya imwe kana maviri mairi apo kopi uye kudarika. Ramba uchiita nguva chaiyo-chengeta mwedzi mishoma mishoma kuti uone kana Google Analytics iri kutora kushanya kwako pawebsite yako. Kana iGoogle ichiri kukuunganidza, pane imwe nguva iyo IP yako yakashanduka, saka ndiyo nguva yekushandisa firiji itsva.